ဘင် 10 လိင်ဂိမ်း–အွန်လိုင်းရုပ်ပြောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်း
ဘင် 10 လိင်ဂိမ်းယုတ်ရုပ်ပြောင်ညစ်ညမ်းအရေးယူနှင့်အတူဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်
ညစ်ညမ်းဂိမ်းများ၏ကမ္ဘာရုပ်ပြောင်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလတ်စားဖြစ်ပါတယ်,ကာတွန်းရုပ်ပြောင်နယ်ပယ်ကိုအတူတကွရပ်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း. တချို့ကကာတွန်းအခြားသူများထက်ပိုရုပ်ပြောင်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ငါ့နည်းနည်းမြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပြောင်များကဲ့သို့ကာတွန်းတစ်ခုလုံးကိုဆိုဒ်များဖန်တီးပြီးနောက်,ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘင်ဂို 10၏အရေးယူအာရုံစိုက်ဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းတစ်ခုစုဆောင်းမှုရှိသည်။ ဤဆိုဒ်အသစ်တွင်သင်သာဂိမ်းအသစ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အမြင်မဆိုအချက်အနေဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေသောသာမီလီလီတာ5 ဂိမ်းများကိုသီးသန့်တပ်ဆင်ပါ။, သူတို့ကသငျသညျဝဘ်ပေါ်တွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သောအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်အချို့ရှိသည်,သူတို့ကဂိမ်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေအများကြီးနှင့်အတူလာကျနော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဖြည့်ဆည်းဖို့မျိုးစုံဂိမ်းစတိုင်များတပ်ဆင်ထားသည်။ သင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တောင်မှသူတို့ဟာအလွန်ကြီးစွာသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ကြောင်းသေချာအောင်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ပေါ်မှာသူတို့ကိုစမ်းသပ်ပြီးပါတယ်။ သင်ဂိမ်းများကိုမကစားမီဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်မလိုပါ။ သင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုပါ။, သင်ဒီမှာဂိမ်းကစားနေစဉ်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာသင်အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်ပြုပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါငျးတို့သဂိမ်းရင်းသင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့နေထိုင်စေရန်ဘင်ဂို 10 လိင်ဂိမ်းအပေါ်ပိုပြီးအင်္ဂါရပ်များရှိသည်နှင့်ကြင်နာအရေးယူဘို့ပြန်လာကြ၏။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ကစားသမားအားလုံးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်စေမည့်အသိုင်းအဝိုင်းကိရိယာအချို့ပါ ၀ င်သည်။ သငျသညျဂိမ်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်မသာ,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအမှန်တကယ်သင်လိုချင်သည့်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်အပေါ်အချို့သောအပူဆွေးနွေးမှုများခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာအသစ်တစ်ခုကိုဖိုရမ်စတင်ခဲ့,မသက်ဆိုင်ကဘင်အပေါ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကို၏,သင်မျှဝေချင်စေခြင်းငှါမဆိုအခြားစိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကို.
အဆိုပါဘင်ဂိုကစားပွဲများအတွက်အားလုံးဂိမ်း 10 ကီလိုပရိသတ်တွေ
ဘင်ဂျမင် ၁၀ လိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူသင်သိသမျှသောဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သည့်အမာခံလိင်ဂိမ်းစီးရီးတစ်ခုကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္တုန္းကဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံေတြနဲ႔ ဂိမ္းေတြေဆာ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံေတြနဲ႔ ဂိမ္းေတြေဆာ့ျဖစ္တယ္။ တဖန်သင်တို့မျိုးစုံဂိမ်းအတွေ့အကြုံများကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကလိင်အပျော်အပါးအဖြစ်လာကြလိမ့်မည်နှင့်သင်အမြဲဒီကာတွန်းကနေတောင်းချင်သောသားငယ်များ၏တွန်းအားပေးခံစားအကောင်းဆုံးအချိန်ရပါလိမ့်မယ်။, တချို့ကလူကြိုက်အများဆုံးရော်ဂိမ်းများည့္ဒီအန္တိတိုင်ဆန်၊Charmcaster တၴမန္း၊ကျေးအစိမ်းရောင်၊Eunice၊ဂျူ Yamamoto နှင့်ဆန်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူလေ့ကျင့်နိုင်သောအမျိုးသမီး၏ကျော်လွတ်လပ်ခွင့်တွေအများကြီးပေးတော်မူမည်ဟူသောပိုကီမွန်လိင်အရေးယူမှု၌ဤသားငယ်များကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘင် ၁၀၏ရှုထောင့်မှကစားမည့်ဂိမ်းများလည်းရှိသည်။ သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောမိကျောင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်နှင့်ကျွန်တော်အရူးအန်စာတုံးအမျိုးမျိုးတို့နှင့်အတူအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောသမျှသောဘလူးတုသ်ကိုအသုံးပွုနိုငျပါလိမျ့မညျကြောင့်ဤအပျော်စီးဂိမ်းလည်းဂြိုလ်သားလိင်အရေးယူမှုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ သင်ပင်သင်အင်္ဂါရပ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုသော့ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်ကြောင်းအဖြစ်အချို့သောတိုက်ပွဲများအရေးယူရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်လစဉ်လတိုင်းပိုပြီးအရေးယူဆောင်ကြဉ်း,ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်တစ်ဦးမျက်စိစောင့်ရှောက်လော့။
ဘင် 10 လိင်ဂိမ်းသင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသုံးပြုသူနှင့်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်သမျှသောအင်္ဂါရပ်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အသစ်တစ်ခုဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်ဤဂိမ်းအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ကစားနိုင်ပြီးသင်၏ရှာဖွေမှုကိရိယာများ၏အကူအညီဖြင့်သင်တွေ့ကြုံခံစားလိုသောစိတ်၊လွယ်ကူစွာဖြင့်သင်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့စနစ်တကျဖျောပွခကျြအပေါငျးတို့သဂိမ်းများနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်များအတွက်ဖော်ပြချက်များရေးသားခဲ့သည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာဆိုရင်အခါ,သင်အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်နေသောသိနိုင်သိသင့်ကာတွန်းစိတ်ကူးယဉ်ခံစားနိုင်. ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဂိမ်းပူဇော်နှင့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းဘယ်တော့မှမ။ ငါတို့သည်လည်းအဆုံးစာဝှက်စနစ်အဆုံးကိုဆက်ကပ်ခြင်းနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏အခန်းထဲမှာဂိမ်းကစားဖမ်းမိမရကြဘူးအဖြစ်,သင့်ဘင် 10 ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဘေးကင်းလုံခြုံသည်။